🥇 ▷ redmi Note 8 (Pro) waxay muujineysaa inay naftoodu ku noolyihiin iyo kubad cusub ✅
redmi Note 8 (Pro) waxay muujineysaa inay naftoodu ku noolyihiin iyo kubad cusub
Sida muuqata, oo ka duwan sidii markii hore la maleeyay, markan annaguna waxaan yeelan doonnaa mid Kala duwanaanshaha Pro ee Redmi Note 8. Farqiga ugu weyn ee u dhexeeya labada aaladaha, labadaba leh gadaal gadaal-qabad leh ‘camera’, ayaa noqon doona dareeraha ugu weyn ee la isticmaalo.
On redmi note 8 waxaa jiri doona “caadi” 48 xariir MP (garan mayno inuu yahay kii ay sameeyeen Sony ama Samsung), the Kala duwanaansho Pro halkii uu ka heli lahaa inta badan laga hadlo 64 MP dareeraha. Sidoo kale markan nooca ugu sareeya wuxuu kusii nagaan doonaa suuqa bari, ama Redmi sidoo kale miyey ka farxin doontaa reer Yurub?
Sidoo kale aqri: redmi Note 8: Helio G90T chipset chipset waxaa xaqiijiyay shirkadda
QODOBADA REDMI 8 PRO Waxay Bilaabmaysaa Inay Wanaagsan Ka Hesho NET, Ka Qayb Qaadashada Xisaabaadka
redmi note 8 Pro, midab cagaaran, oo lagu dhex sawiray weli muuqaalka sawirka barta | Evosmart.it
Si loo xaqiijiyo joogitaanka kala duwanaanshaha Pro waa koorsooyinka ugu horreeya iyo sawirrada sameynaya wareegyada Shabakadda bulshada Shiinaha ee Weibo. Dhamaan qoraaladaas si horumarsan ayaa looga saarayaa goobta. Waa calaamad muujinaysa in kuwanu ay yihiin agabyo iskood u taagan oo jadwalka ka soo baxay.
Mid ka mid ah sawirradii ugu horreeyay wuxuu ka yimid a xayeysiinta fiidiyowga, halkan waxaan ku arki karnaa midab gaar ah kaas oo si dhaw ula mid ah kuwa Xiaomi Mi 9T waa Mi 9T Pro (taas oo Shiinaha looga dooday sidii Redmi K20 iyo K20 Pro). Waxaa jira hooska cagaaran aad ayuu uga badan yahay dhinacyada, ka dibna wuxuu u baaba’aa dhanka xarunta, oo taabasho fiican u leh aaladda.
Haddii dhammeystirka noocan ahi aad kuugu yahay tamarra, sida ka muuqata shaxanka kale, sidoo kale mid ayaa jiri doona midab cad oo qurux badan. Xayeysiinta / teaserku waa soo noqnoqday Hal-ku-dhigga Lei Jun: “Waxaad ka arki kartaa waxbadan oo adduunka quruxda badan ”. Erayadan si cad ayaa loola jeedaa Qeybta sawirka Redmi note 8 Pro taas, marka lagu daro 64 MP dareeraha ugu weyn, waa inuu mid ka helo kamarad leh muraayad ballaaran, aragti nooca macro iyo khabiir xog ogaal u ah macluumaadka gudaha.
Redmi Note 8 waxaan sidoo kale lahaan doonnaa midab cad oo qurux badan | Evosmart.it
Si aad u tirtirto redmi note 8 Pro wuxuu ahaa paparazzi ku nool midabka cagaaran ee soojiidashada leh. Sida aan arki karno way imaanaysaa si buuxda u xaqiijiyey naqshadda ay soo bandhigtay bixinta maalmihii ugu dambeeyay iyo, ka hooseeya kaamirooyinka lagu dhex dhejiyay moodeelka weyn, waxaan arki karnaa farristaha farta (sidaa darteed akhristaha ka hooseeya muujinta).
redmi note 8 oo lagu sawiray midab cagaaran oo qurux badan | Evosmart.it
Laakiin waax sawir aad u horumarsan ayaa ku filnaan doonta inay ka dhaadhiciso dadka isticmaala inay ka doorbidaan Redmi Note 7? Xitaa haddii shakiga laga qabo doorashada processor-ka uu jiro, waa inaad isku daydaa kaliya inaad awood u yeelato inaad ku siiso fikradaha ugu horreeya ee aaladdaan. Xaqiiqdi way adkaan doontaa in laga gudbo natiijooyinka aadka u wanaagsan ee ay gaadhay Redmi iibsiga ugu fiican haatan.